Hery Rajaonarimampianina:FANAMBY NY FANDRAISANA NY FRANKÔFÔNIA -
AccueilSongandinaHery Rajaonarimampianina:FANAMBY NY FANDRAISANA NY FRANKÔFÔNIA
Hery Rajaonarimampianina:FANAMBY NY FANDRAISANA NY FRANKÔFÔNIA
28/11/2016 admintriatra Songandina 0
Nambaran’ny filoha Hery Rajaonarimampianina fa fanamby goavana ny nandraisana sy nampiantranoana ny fihaonana an-tampon’ny Frankôfônia, andiany faha-16 (22 -27 Novambra). Maro ireo tombontsoa azon’i Madagasikara ary niraradraraka rahateo ny fanohanana sy fanampiana an’i Madagasikara.
Anisan’ny hetsika iraisam-pirenena goavana ahafahan’i Madagasikara mivelatra sy mampivelatra amin’ny lafiny maro ny Frankôfônia. Indrindra ny fisian’ny fifanakalozana eo amin’ireo samy firenena mpikambana, eo amin’ny lafin’ny toekarena, politika, sehatry ny tanora, ny fandriam-pahalemana, ny tontolo iainana, sns.
Noho izany, notsindrian’ny filoham-pirenena fa maro ny lahadinika nifanaovan’ireo firenena mpikambana eo anivon’ny Frankôfônia amin’ny fampandrosoana ara-toekarena, fandriam-pahalemana ary indrindra nifototra tamin’ny firaisankina sy fanomezan-danja ny vehivavy ary ny fanomezana sehatra ny tanora, sns.
Anisan’ny firenena mifanohana amin’i Madagasikara, hoy hatrany ny filoha Hery Rajaonarimampianina, i Frantsa. Noho izay indrindra, manana andraikitra sy anjara teorana lehibe eo anivon’ny Frankôfônia i Frantsa sy Madagasikara.
Nisy ihany koa ny fifanarahan’ny firenena roa tonta mba hanohanana sy hisian’ny fiaraha-miasa eo amin’ny lafiny ara-toekarena indrindra fa mipaka amin’ireo orinasa frantsay sy orinasa vahiny maro eto amintsika.
Ankoatra izay, nambaran’ny filoha Hery Rajaonarimampianina ihany koa ny fijerena ny fomba manokana amin’ny fampivoarana sy fampianarana ny teny frantsay eto Madagasikara.